Axmad | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 10
Author Archives: Axmad	Dhagayso Warka Duhurnimo.
Wararka kabaxa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxaa lagu soo qaataa dhacdooyinka ka taagna dalka iyo dibadda. Halkan ka dhagayso War-duhur-08-12-2016-lite	Read More »
Ciidamada Yahuudda oo qof shacab ah ku toogtay Daanta-galbeed.
Wararka ka imaanaya dhulka Yahuudda xooga uga heysato Muslimiinta ayaa ku waramaya in ciidamada maamulka Yahuudda ay saaka toogteen wiil dhalinyaro ah oo kamid ah dadka degan magaalada Naabulis. Ciidamo Yahuud ah oo ku sugnaa Kontroolka Zactara oo dhaca afaafka hore ee magaalada Naabulis ee daanta-galbeed ayaa rasaas ku furay wiilkan dhalinyarada ah, iyadoo aysan jirin wax ay marmarsiyo uga ...	Read More »
Dowladda Masar oo Ciidamo ay ka joogaan dalka Suuriya.
Sida ay sheegayaan warbixinno lagu daabacay qaar katirsan warbaahinta Carbeed, waxaa Saraakiil sare oo la taliyaal ah kana socoda Xukuumadda Siisi ay ku suganyihiin dalka Suuriya, kuwaas oo oo Talooyin ciidan siiya malleeshiyaadka Nusayriyada. Wargeyska Al-Akhbaar oo kasoo baxa dalka Lubnaan kana ag dhow ururka shiiciga ah ee Xisbullaata ayaa daabacay warbixin uu ku faafaahiyay joogitaanka Saraakiil sar sare oo ...	Read More »
Aala-Sucuud oo dil Toogasho ah ku xukumay Tobaneeyo Ruux.
Maxkamad ku taalla magaalada Al-Riyaad ee caasimadda maamulka Aala-Sucuud ayaa xukun toogasho ah ku riday Tobaneeyo Ruux, kuwaas oo ay ku eedeysay iney basaas u ahaayeen dowladda shiicada Iiraan. Aala-Sucuud ayaa dadkan la xukumay oo tiradoodu gaareyso 30 Ruux waxay ku eedayeen iney damacsanaayeen howlgelinta unug jawaasiis ah oo u shaqeysa Sirdoonka Iiraan. Sida ay sheegayaan Warbaahinta, waxaa raggan gacanta ...	Read More »
Khasaare uu gueystay dab ka kacay Maraykanka oo sii kordhay.
Waxaa aad u kordhay khasaaraha ka dhashay dab habeenadii Jimcaha ahayd ka kacay goob lagu waday iney ka dhacdo xaflada ay isugu imaanayeen dad Ameerikaan ah. Dabka oo ahaa mid xoogan islamarkaana si kedis ah ku kacay ayaa ka kacay dhismo ku yaala magaalada Auckland ee dalka Maraykanka, halkaas oo ay ku socoday diyaar garow ku aadan in lagu dhigo ...	Read More »
Dhowr Ruux oo Filastiiniyiin ah oo ku dhintay xuduud beenaadka Filastiin iyo Masar.
Ugu yaraan Afar Ruux oo Filastiiniyiin ah kana mid ah dadka ka shaqeeya godadka dhulka hoostiisa ka qodan ee qarsoodiga h kuwaas oo reer Filastiin ay u isticmaalaan in cunto iyo dawo ay marsadaan maadaama go’doon dhanka cirka iyo mid badda ahba uu saaranyahay sanado dhowr ah. Dadka geeriyooday ayaa waxaa sababay dhimashashadooda sida ay sheegeen ilo xog ogaal ah ...	Read More »
Diyaarad dagaal oo lagu soo riday magaalada Xalab.
Ciidamada Mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada Xalab ayaa ku guuleystay iney dhulka soo dhigaan mid kamid ah diyaaradaha dagaalka ee Nidaamka Bashaar Al-Asad taas oo isku dayaysay iney duqeyn fuliso. Sida ay sheegayaan wararka aanu heleyno waxaa u suura gasho ciidamada difaaca cirka ee Mujaahidiinta iney saaruukh huwiyaan diyaaradda, islamarkaana ay sooo ridaan. Warbaahinta Nidaamka Bashaar taageersan ayaa qiray in ...	Read More »
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo soo bandhigtay Diyaarad drone ah oo ay gacanta ku hayso(Sawiro).
Iyadoo maalintii shalaya deegaanno hoos dhaca degmada Awdheegle ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha hoose ay kusoo dhacday diyaarad drone ah oo ay leedahay dowladda Maraykanka Islamarkaana Mujaahidiintu gacanta ku dhigeen ayaa waxaa lasoo bandhigay diyaaradaas. Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha hoose ayaa warbaahinta Islaamiga ah usoo bandhigtay diyaaraddda ku dhacday gacanta Mujaahidiinta oo ah diyaarad wax basaasta. Ciidamo katirsan ...	Read More »
Warka Subaxnimo ee Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan waxaa lagu soo qaatay dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda. Halkan ka dhagayso War-subax-01-12-2016	Read More »
Iyadoo dhawaanahan ay la kulmayeen Muslimiinta Barma dhibaatooyin kala gedisan oo uga imaanaya Xukuumadda Buudiga ah iyo malleeshiyaad ay iyadu dhistay ayaa waxaa arinkaas ka hadlay Imaarada Islaamiga ah ee Afqaanistaan. Bayaan kasoo baxay Imaarada oo lagu faafiyay Internetka ayaa lagu sheegay in Muslimiinta Rohingiya ee tirada yar loo dhibaateynayo oo kaliya iney Muslimiin yihiin, islamarkaana Allah si dhab ah ...	Read More »
Page 10 of 45« First...«89101112	»	203040...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan